Exodus 35 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
35 Akyiri yi Mose frɛɛ Israel asafo nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea Yehowa ahyɛ sɛ yɛnyɛ ni:+ 2 Momfa nnansia nyɛ adwuma,+ na da a ɛto so ason no de, ɛyɛ da kronkron ma mo, ɛyɛ homeda ma Yehowa, monhome koraa. Obiara a ɔbɛyɛ adwuma saa da no, wobekum no.+ 3 Monnsɔ gya wɔ mo tenabea biara homeda.” 4 Mose toaa so ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ: “Nea Yehowa aka ni, 5 ‘Munyi ntoboa mma Yehowa.+ Obiara a ne koma ka no+ no mfa nneɛma yi mmrɛ Yehowa: sika kɔkɔɔ, dwetɛ, ne kɔbere+ 6 ne ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan, nwera, ne abirekyi nhwi,+ 7 ne adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ, ne sukraman nhoma, ne ɔkanto dua, 8 ne ngo a wɔde begu kanea mu, ne balsam ngo a wɔde bɛyɛ ɔsrango ne aduhuam,+ 9 ne sohambo ne abohene foforo a wɔde besisi asɔfotade+ ne nkatabo+ no mu. 10 “‘Na wɔn a wɔwɔ nyansa koma+ nyinaa mmra mmɛyɛ nea Yehowa ahyɛ nyinaa. 11 Wɔmmɛyɛ ntamadan no ne ɛho nneɛma ne ne nkataso, ɛho nkawa ne nnua ne nea wɔde bɛbeabea mu, ɛho adum ne ne nnyinaso; 12 Adaka+ no ne nnua+ a wɔde bɛsoa ne ne mmuaso,+ ne ntwamutam+ a ɛsɛn hɔ no; 13 ɔpon+ no ne nnua a wɔde bɛsoa ne ɛso nneɛma nyinaa, ne paanoo a wɔde ba Onyankopɔn anim;+ 14 ne kaneadua+ no ne ɛho nneɛma ne akanea a esisi so ne ngo+ a wɔde begu mu; 15 ne muka a wɔbɛhyew aduhuam wɔ so+ ne nnua a wɔde bɛsoa; ne ɔsrango ne aduhuam;+ ne ntama a ɛsɛn ntamadan no ano; 16 ne muka+ a wɔbɛbɔ so ɔhyew afɔre ne kɔbere nkantankantan a ɛda so, ne nnua a wɔde bɛsoa ne nneɛma a aka nyinaa; ne ɛsɛn+ no ne ne nnyinaso; 17 ne ntama a ɛsensɛn adiwo,+ adum a ɛwɔ hɔ ne ne nnyinaso; ne ntama a ɛsɛn adiwo no pon ano; 18 ne ntamadan no ho mpɛɛwa ne adiwo no mpɛɛwa ne ɛho nhama;+ 19 ne ntade+ a wɔanwene a wɔde bɛsom wɔ kronkronbea hɔ, ɔsɔfo Aaron ntade kronkron+ ne ntade a ne mma de bɛsom sɛ asɔfo no.’” 20 Ɛnna Israel asafo no nyinaa fii Mose anim kɔe. 21 Na obiara a ne koma kaa no+ no bae, na obiara a ne honhom kaa no no yii ntoboa maa Yehowa sɛ wɔmfa nyɛ ahyiae ntamadan no ne ɛhɔ som adwuma nyinaa ne ntade kronkron no. 22 Mmarima ne mmea nyinaa, obiara a ne koma kaa no no bae. Wɔde nkapo ne asomuade ne nkawa ne mmea agude bae; wɔde biribiara a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ bae, kyerɛ sɛ obiara a ɔpɛ sɛ ɔde sika kɔkɔɔ brɛ Yehowa sɛ ohim afɔre no.+ 23 Na obiara de ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan, nwera, abirekyi nhwi, adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ, ne sukraman nhoma a ɔwɔ bae.+ 24 Obiara a oyii dwetɛ ne kɔbere sɛ ne ntoboa no de brɛɛ Yehowa, na obiara a ɔwɔ ɔkanto dua no nso de bae sɛ wɔmfa nyɛ adwuma no. 25 Na mmea a wɔwɔ nimdeɛ+ nyinaa de wɔn nsa too asaawa, na wɔde nea wɔtoe no bae, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan, ne nwera. 26 Na mmea a wɔwɔ nimdeɛ a wɔn koma kaa wɔn nyinaa nso too abirekyi nhwi. 27 Nea Israel mpanyimfo nso de bae ne sohambo ne abo a wɔde besisi asɔfotade ne nkatabo no mu,+ 28 ne balsam ngo ne ngo a wɔde begu akanea mu ne nea wɔde bɛyɛ ɔsrango ne aduhuam.+ 29 Ɔbarima anaa ɔbea biara a ne koma kaa no no de biribi bae sɛ wɔmfa nyɛ adwuma no, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. Israelfo fi wɔn pɛ mu de ayɛyɛde brɛɛ Yehowa.+ 30 Afei Mose ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ: “Hwɛ, Yehowa afrɛ Hur ba Uri ba Besalel+ a ofi Yuda abusuakuw mu. 31 Na ɔde Onyankopɔn honhom ahyɛ no mã, na wama no nyansa ne ntease ne nimdeɛ a ebetumi ama ɔde ahokokwaw ayɛ adwuma biara, 32 na ɔbɛyɛ odwumfo a ɔwɔ sika ne dwetɛ ne kɔbere ho nimdeɛ,+ 33 ne adwene a ebetumi ama ɔde abo adi adwini na wasen nnua ayɛ nneɛma horow.+ 34 Na ɔde ahyɛ ne komam sɛ ɔnkyerɛkyerɛ, ɔno ne Ahisamak ba Oholiab+ a ofi Dan abusuakuw mu. 35 Na wama wɔn nyansa+ a wɔde bɛyɛ adwumfo adwuma na wɔde asaawa adi adwini,+ na wɔde ahama bruu ne tankɔkɔɔ ne koogyan ne nwera anwene nneɛma, ntamanwemfo a wotumi yɛ adwuma biara, nnipa a wɔde wɔn adwene di adwini horow.